မိသားစုနက္ခတ်များနှင့်သင်၏တည်ရှိမှုလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းပါ။ ဘာတွေလဲ? မိသားစုနက္ခတ်များသည်မသိစိတ်၌ဖုံးကွယ်နေသောအတုံးများနှင့်ဒိုင်းနမစ်များကိုထုတ်ပစ်ရန်ရည်ရွယ်သောကုထုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘိုးဘွားများအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုမှမသိလိုက်ဘဲအမွေရထားသောလုပ်ကွက်များ ဤအခြေအနေများသည်အဆက်မပြတ်ထပ်တလဲလဲနည်းလမ်းဖြင့်ဟန့်တားခြင်းဖြင့်ဘဝတိုးတက်မှုကိုလုံး ၀ ...
Loris ချစ်သူများနေ့ - သြဂုတ်လ 6, 2021 0
အနှိပ်နှင့်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ: ကောင်းကင်သို့တံခါး။ Wellness, Relax, အာရုံခံစားမှုအားလုံးကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကောင်းကင်ခံစားချက်။ ဒါတွေဟာကမ္ဘာကြီးကသူ့အလိုလိုလှပနေတဲ့အလှတရားတစ်ခုပြီးနောက်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေကိုသတ်မှတ်ဖို့ခံစားချက်တွေပါ။ ဒါက Isac (Integrated Sensorial Approach) မှပေါ်ထွက်လာသောအရာဖြစ်သည်။
Gucci အိမ် Lady Gaga နှင့် Adam Driver တို့မျှော်လင့်ထားသည့် Ridley Scott ဇာတ်ကား၏ပထမဆုံး trailer ကိုဖြန့်ချိလိုက်ပါပြီ။ ညနေနှောင်းပိုင်းတွင် House of Gucci ၏ဇာတ်ကောင်ပိုစ့်များကိုပထမဆုံးထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Patrizia Reggiani အဖြစ် Lady Gaga က Adam Driver အဖြစ် Maurizio Gucci အဖြစ် Adam Driver အပါအ ၀ င်သရုပ်ဆောင်များကို ဦး ဆောင်သည်။
Giulia Caruso - 29ပြီလ 2021, XNUMX 0
မလိုချင်တဲ့ guest ည့်သည်။ မင်းရဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်အိပ်မက်တနင်္ဂနွေကိုအိပ်မက်ထဲမှာအိပ်ချင်နေတာလဲ။ သစ်တောတစ်ခုထဲ၌နှစ်မြှုပ်။ ကမ္ဘာနှင့်သီးခြားနေသလား။ ဆီးနှင်းလွှမ်းမိုးသောဆောင်းတွင်းလေထုကြောင့် ပို၍ ပင်မှော်ဆန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏လက်တွဲဖော်၊ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနှင့်အတူနေရန်စိတ်အေးချမ်းမှုနှင့်အပန်းဖြေမှုအတွက်အကောင်းဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့သို့မဟုတ်ထွက်ခွာသွားရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ ...
Gucci ၏အိမ်သည် Como ရေကန်သို့ရောက်ရှိသည်
Giulia Caruso - မတ်လ 10, 2021 0
House Of Gucci သည် Lake Como တွင်ရောက်ရှိပြီး Al Pacino နှင့် Jeremy Irons တို့သည် Cernobbio ၌ရောက်ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ထုတ်လွှင့်မည့် Ridley Scott ၏အလွန်မျှော်မှန်းထားသည့် House Of Gucci ၏သရုပ်ဆောင်မှုသည်နာမည်ကျော်ပြီးစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော Villa d'Este တွင်တည်ရှိလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်သြဇာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များကိုကြိုဆိုသောဂုဏ်သိက္ခာရှိသောဟိုတယ်၊ ဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်မင်းသားများ ...
Giulia Caruso - ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2021 0
ရုပ်ရှင်လောကတွင်မြင့်တက်လာသည်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Stefani Joanne Angelina Germanotta ရဲ့နာမည်ဝှက် Lady Gaga ဟာရုပ်ရှင်လောကမှာသူ့ကိုယ်သူပိုပိုပြီးထူထောင်လာနေပါတယ်။ Machete Kills and Sin City တွင်အသေးစားအပိုပစ္စည်းများနှင့်သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အစကိုငါတို့မှတ်မိသည်။ အမေရိကန်၏ Countess အဖြစ်သူမ၏ဇာတ်လိုက်ကိုဘာသာပြန်သည့်အခန်းကဏ္မှစကားပြန်အဖြစ်သတ်သည်။
Giulia Caruso - ဖေဖော်ဝါရီလ 21, 2021 0
Downton Abbey နှင့် Gossip Girl ကြားတွင် Julia Quinn ၏ကျော်ကြားသောအချစ်ဝတ္ထု ၀ တ္ထုများနှင့် Shonda Rhimes တို့ပူးတွဲထုတ်လုပ်သော Netflix မူရင်းဇာတ်လမ်းဒရာမာအသစ် Bridgerton ကိုငါတို့နေရာယူသည်။ ငါတို့သည် ၁၈၀၀ ခုနှစ်များက Regency Era (၁၈၁၃) ၏အဓိကအနေနှင့်လန်ဒန်မြို့၌ပိုးပန်းနေသောရာသီ၌မိန်းမပျိုများသည်ခင်ပွန်းသည်နှင့်မိခင်များကိုရှာဖွေသောအဓိကဇာတ်ဆောင်များအဖြစ်မြင်ကြသည်။
Giulia Caruso - ဖေဖော်ဝါရီလ 15, 2021 0
ပူပန်သောက၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ စိတ်မပါ ၀ င်မှုမရှိသောသက်တောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့များ၊ အလုပ်၊ လေ့လာမှု၊ ကလေးများနှင့်အထူးသဖြင့်ယခုကဲ့သို့သောကပ်ရောဂါကာလများတွင်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တစ်နှစ်ခန့်ကြုံဖူးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များတွင် ပို၍ ပို၍ နေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦး တည်စေသည်။ ငါတို့နေထိုင်ရာနေရာကကိုယ်စားပြုတယ် ...
ဒါပေမယ့် porn မှာအမျိုးသမီးတွေဘာတွေရှာနေလဲ။ စုံတွဲသည်အတူတကွညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်လိုလျှင်မည်သို့လုပ်မလဲ။ သူတို့၏ဖန်တီးမှု၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်သင်ယူရန်၊ ၎င်းတို့၏အဖော်နှင့်မတူသောခံစားချက်ကိုဖန်တီးလိုသောဆန္ဒအတွက်စမ်းသပ်ရန်။ ပြောဖို့အချိန်ကျလာပြီ၊ တီးတိုးမပြောတော့ဘူး ... ဒါပေမယ့်မိန်းမတွေလည်း porn ကြည့်တာမင်းသိလား။ လေ့လာဆန်းစစ်မှုများနှင့်ရလဒ်များ ...
Giulia Caruso - နိုဝင်ဘာ 29, 2020 0
သင်တို့မည်မျှသည်ထောပတ်နှင့်ပညာရှိ gnocchi ကိုမမြည်းစမ်းဖူးကြသနည်း။ ဒီနေ့ငါပြင်ဆင်ဖို့ရိုးရှင်းပြီးမြန်တဲ့ဟင်းကိုမင်းကိုတင်ပြချင်ပေမယ့်တချိန်တည်းမှာအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အရသာနဲ့အနံ့လေးတွေနဲ့။ လွယ်ကူပြီးစားကောင်းသည်ဟုထင်ရသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံအရိုးရှင်းဆုံးဟင်းလျာများသည်သူတို့၏ပြင်ဆင်မှုကိုလျှော့တွက်။ မရသောအစားအစာများဖြစ်သည်။ ငါ gnocchi အချို့ကိုရွေးခဲ့တယ် ...
Loris ချစ်သူများနေ့ - နိုဝင်ဘာ 27, 2020 1
Gerard Butler နှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရုပ်ရှင်သစ် Clarke ဟုခေါ်သောဂြိုဟ်သိမ်တစ်ခုသည်ကမ္ဘာနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာရွေ့လျားတော့မည်။ အလွန်ကြီးမားသောကောင်းကင်ဘုံ၏ခန္ဓာကိုယ်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုလာစနစ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်လာခြင်းသည်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များအားရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ဆွဲငင်အားကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီအကဲဖြတ်ရန်ခွင့်မပြုပါ၊ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသတင်းမီဒီယာများသည်၎င်းတို့လက်ဝယ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားရန်ခွင့်မပြုပါ။
မျက်လုံးများသည်စိတ်ဝိညာဉ်၏ကြေးမုံဖြစ်လျှင်ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်ကွဲနေသောမှန်တစ်ချပ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ ရောဂါဗေဒ narcissist တစ်ယောက်ဘယ်သူလဲ၊ သူဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြန်လာပြီး၊ သူ့ကိုအဓိကကဏ္lများကိုဖော်ပြထားသောသူ့ကိုတိုတိုတုတ်တုတ်ပြန်သတိရလိမ့်မယ်။ ငါတို့ကယောကျာ်းလေးဖြစ်စေ၊ မိန်းကလေးဖြစ်စေစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများနှင့်ထိတွေ့မိသောအခါရောဂါဗေဒ narcissism အကြောင်းပြောကြသည်။
သူတို့ဒီမှာ! ဒီတော့လှပတဲ့အိုင်တီအစစ်အမှန်ကြည့်ရှု ... အစစ်အမှန်သော့
Loris ချစ်သူများနေ့ - စက်တင်ဘာ 27, 2020 0
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကဤအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားသိခဲ့ရပြီဖြစ်သောကြောင့် Blade Runner ကဲ့သို့ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်များတွင်ဖော်ပြထားသောအနာဂတ်ကိုအမှန်တကယ်အသက်ရှင်နေပြီဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်ပါပြီ။ ပိုင်ရှင်ဖြစ်လိုသူများ၏ ၀ ယ်လိုအားသည်အလွန်အရေးကြီးလာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးသိသိသာသာများပြားလာသည်။ သူတို့၏အောင်မြင်မှုကိုအမေရိကန်နှင့်ဂျပန်မှစတင်ခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါမိန်းကလေးများ၊ ငါဒီကိုလာတာမကြာသေးတဲ့အခြားအံ့သြဖွယ် Pixi Beauty စုဆောင်းမှုနဲ့ထပ်တွေ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းသိတဲ့အတိုင်းငါထုတ်ကုန်တွေကိုငါမစမ်းသပ်ခင်ငါသိတယ်၊ ဟုတ်ပြီ၊ အခုငါအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။ Pixi ကချီးမြှင့်တဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့နေ့စဉ်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုအတွက် Retinol & Jasmine Collection ကိုငါတင်ပြမယ် ...
Loris ချစ်သူများနေ့ - ဇွန်လ 4, 2020 0
ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသောဇာတ်လမ်းသည်အမှန်ဖြစ်ပြီးအမည်မဖော်လိုသောစာဖတ်သူတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောပန်းတိုင်တစ်ခုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာမည်သည့်တားမြစ်ချက်များ (သို့) အလျှော့အတင်းမပါဘဲလက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရည်အချင်းများကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေလိုသည်။ သူတို့ရဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးနဲ့အန္တရာယ်အရှိဆုံးလက်နက်တွေထဲကတစ်ခုက ...
Lady Gaga နှင့် Ariana Grande မှ Rain On Me၊ အလွန်မျှော်လင့်ထားသည့်တစ်ကိုယ်ရေ!
Lady Gaga နှင့် Ariana Grande တို့၏ Rain On Me duet ၏အလွန်မျှော်လင့်ထားသော video clip သည် online တွင် Miss Germanotta ၏ album အသစ် Chromatica မှမေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင်ဖြန့်မည့်ဒုတိယမြောက်သီချင်းဖြစ်သည်။ အခက်အခဲများကြားမှလက်မလျှော့ရန်ဓမ္မသီချင်းသည် Rain On Me သည်ကြုံတွေ့ရသောစိန်ခေါ်မှုများအတွက်သာဓကတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းရုန်းကန်ရမည့်အရာထက်ခြောက်သွေ့ခြင်းကိုပိုလိုလားသည်။
Pixi နှင့်ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုမှာဆက်လက်ရှိနေသည်။ ဒီနေ့ Pixi Beauty collection သစ်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုငါလာပြချင်တယ်၊ ငါအရမ်းပျော်တယ်။ ဒီအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုကြိုးစားရတာကျွန်တော်ပျော်ခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းခံစားရတယ်၊ တကယ်တော့ငါ့အသားအရေကပိုပြီးရေဓာတ်ပြည့်ဝနေတယ်ဆိုတာချက်ချင်းပဲမင်းကိုပြောပြပါမယ်။
“ THE GREAT DICTATOR” တွင်မမေ့နိုင်သော Charlie Chaplin သည်လူသားများအားမိန့်ခွန်းပြောသောအခါချမ်းတုန်ခြင်းသည်အရေပြားပေါ်တွင်စီးဆင်းသွားပြီးလူအားလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်လွတ်လပ်မှုကိုတောင်းဆိုသည်။ ပါဝါကလူတွေဆီပြန်လာလိမ့်မယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=9U-MWPqoL8A&feature=youtu.be "ငါတောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဧကရာဇ်မဖြစ်ချင်ဘူး၊ ဒါငါ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ ငါအုပ်ချုပ်တာကိုမလိုချင်ဘူး။ မဟုတ်သလို ...
ယခုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်နေရာအနှံ့အပြားတွင်၎င်းတို့အကြောင်းကိုကြားသိရပြီးဤသတ္တဝါများနှင့်ဆက်ဆံရသူများသည်၎င်းတို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့သည်သာမန်လူများနှင့်ရောနှောနေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုပြသခြင်းသည်မည်မျှကောင်းသည်ကိုရှင်းလင်းတိကျစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပရဟိတသမားများ၊ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများသည်ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောအမှန်တကယ်နှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည်။
“ ကမ္ဘာကိုချစ်သောမေတ္တာ” သည် Lady Gaga သည်Worldပြီ ၁၈ ရက်ညတွင် Covid-18 အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်သောအရေးပေါ်အခြေအနေ Covid-19 ကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်ကျန်းမာရေး ၀ န်ထမ်းများအားသူမစီစဉ်ပေးခဲ့ပြီးထုတ်လွှင့်သည့်“ One World Together at Home” အစီအစဉ်ကိုသတ်မှတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ နာရီရှစ်နာရီနှင့်အနုပညာရှင် ၇၀ ကျော် ...
Lady Gaga သည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် Global Citizen တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှေ့တန်းတွင် Covid 19 အရေးပေါ်ရင်ဆိုင်နေရသောကျန်းမာရေးလုပ်သားများအားရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန် virtual ပရဟိတဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဧပြီ ၁၈ ရက်ည ၈ နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပြသပြီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မယ် ...
quarantine တွင်သူတို့သည်သူတို့၏ "I" ကိုကိုင်တွယ်သည်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူသည်ပိုမိုအားကောင်း။ တိုးတက်လာလိမ့်မည်၊ အဆိုးမြင်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတို့နှင့်ပတ်သက်သောဘာသာရပ်သည်အခိုက်အတန့်တွင်စနစ်ကျသောလွှမ်းမိုးမှုဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်ပူပန်သောကရောက်ခြင်းနှင့်အကူအညီမဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်နက်ရှိုင်းသောမသက်မသာခံစားမှုကိုယူဆောင်လာသည်။ သူတို့၏သားကောင်များအပေါ် .. IS ...
ဖက်ရှင်၊ အလှအပ၊ သိချင်စိတ်၊ လိင်စိတ်၊ စိတ်ပညာ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိမှု၊ ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများနှင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ပြည့်နေသောကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းကိုအခမဲ့ရယူပါ။ မင်းအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်နည်းစနစ်များဖြင့်အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုသင်တန်းကိုကြည့်ပါ။ မြန်မြန်လုပ်ပါ ...
Brindisi ပြည်နယ်သေးသေးလေး၌ coronavirus မတိုင်မီမကြုံဖူးသောအိပ်မက်များနှင့်စိတ်ခံစားမှုများ ... Mesagne မှမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်နာမည်ကျော် Lewis Capaldi တို့အကြားဤထူးခြားသောစည်းချက်များကိုခံစားကြည့်ကြပါစို့။ Lewis Capaldi နှင့် Stefania Tanzarella တို့နှစ် ဦး သည်“ သင်ချစ်သောတစ်စုံတစ်ယောက်” ၏မှတ်စုများတွင်အဝေး၌ရှိသည်။ “ Smule” အက်ပလီကေးရှင်းမှမတော်တဆမွေးဖွားလာသောအတွေ့အကြုံတစ်ခု "ငါကတဆင့်ဆက်သွယ်တယ် ...
ထာဝစဉ်ထူးခြားသည်။ ငါတို့ဒီလိုမျိုးစွန့်လွှတ်ဖို့တကယ်ဆန္ဒရှိရဲ့လား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ချွင်းချက်မရှိလက်နက်ချခြင်းနှင့်ချွင်းချက်မရှိလက်လျှော့အရှုံးပေးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသေးငယ်။ အသုံးမ ၀ င်ဟုခံစားရခြင်း၊ ၁၉၉၉ ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ဆောင်သည်ဟုအခိုင်အမာဆိုသောသူတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအိပ်မက်တစ်ခုသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ အမှန်မှာ EU ဟုခေါ်သောအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
Loris ချစ်သူများနေ့ - မတ်လ 2, 2020 0
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဒရုန်းများအတွက်ဖက်ရှင်သည်သီးခြားအမိန့်များ သုံး၍ (သို့) စမတ်ဖုန်းများနှင့်အခြားမိုဘိုင်းကိရိယာများမှအဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့်ပျံသန်းလာခဲ့သည်။ ပိုမိုစျေး ၀ ယ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများနှင့်သူတို့၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုရိုးရှင်းပြီးထိရောက်မှုဖြစ်စေသောနည်းပညာထူးခြားချက်များကြောင့်ဤဆောင်းပါးများ ...
Eyelash perm, eyelash tint, eyelash extensions, မျက်တောင်အလှအပအတွက်ရည်စူးသောကမ္ဘာကြီး၌ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်သံသယများရှိခြင်းသည်သဘာဝဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နောက်ဆုံးမျက်မှောက်ကာလ၌ပေါက်ကွဲခဲ့သောနည်းပညာဖြစ်သောမျက်တောင်ခတ်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ ဤကုသမှုအမျိုးအစားကိုမည်သူအားအကြံပြုသနည်း၊ သက်ဆိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်သုံးရန်လိုအပ်သောအချိန်ကာလသည်အဘယ်နည်း။
မျက်ခုံး၊ မုတ်တံနှစ်ခုသည်မျက်နှာကိုဘောင်ခတ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြည့်ကိုသဟဇာတဖြစ်စေသည်။ မျက်နှာ၏အလှအပ၏သင်္ကေတများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သောမျက်ကြည်လွှာသည်ချွေး၊ ဖုန်မှုန့်များ (သို့) တိုင်းတစ်ပါးမှကိုယ်ခန္ဓာများကိုကာကွယ်ပေးသောအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီးမျက်နှာအမူအရာအတွက်အခြေခံကျသောအခန်းကဏ္မှပါဝင်သည်။ ပြီးပြည့်စုံပြီးဆွဲသားကောင်းတဲ့မျက်ခုံးရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
"၂၀၂၀ Pantone အရောင်၊ PANTONE 2020-19 Classic Blue ကိုကျွန်တော်တို့ပြသထားတယ်။ အပြာရင့်ရင့်ရင့်ရင့်ရင့်ရင့်ရင့်ရင့်ရောင်ဖြစ်ပြီးအရောင်တောက်ပနေတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောတည်ငြိမ်သောအခြေအနေကိုစတင်ရန်ဤစကားများဖြင့် Pantone သည်အရောင်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
MusaNews အယ်ဒီတာအဖွဲ့ - အောက်တိုဘာလ 19, 2021 0
123...6351 ၏စာမျက်နှာ 635